တော်လှန်ရေးအစပိုင်းမှာထဲကပါဝင်ခဲ့သော်လည်း ယခုအချိန်ထိဝရမ်းထုတ်မခံရသေးတဲ့ အနုပညာရှင်သုံးဦး – Cele Top Stars
ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်၊ နေတိုးနဲ့ နေခြည်ဦးတို့ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲအနုပညာရှင်တွေအဖြစ် ရပ်တည်နေကြသူတွေပါနော်။ သူတို့ရဲ့ Page တွေဟာလည်း Followers သိန်းနဲ့ ချီပြီး ရှိကြတာကိုလည်း အားလုံး အသိပါပဲနော်။
သူတို့တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိတော်လှန်ရေးမှာ အစပိုင်းက မပါဝင်ခဲ့သော်လည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ Social Punishment လုပ်မှုတွေကြောင့် ခဏတာ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီအနုပညာရှင်သုံးယောက်ဟာ သူတို့ရဲ့Page များတွင် နွေဦးတော်လှန်ရေးအကြောင်း ရံဖန်ရံခါမှသာ တင်လေ့ရှိကြတာပါနော်။အခုချိန်မှာတော့ အနုပညာရှင်များနဲ့ ဂီတလောကမှ အဆိုတော် တော်တော်များများဟာ ၅၀၅(က) ဖြင့် တရားစွဲဆိုခံ ထားရပါပြီ။
အနုပညာရှင်များနဲ့ အတူ ပြည်သူတစ်ချို့လည်း ၅၀၅(က) ဖြင့် တရားစွဲဆိုခံထားရကြောင်း သတင်းများတွင် ကြေငြာခဲ့သော်လည်း သူတို့သုံးယောက်လုံးမှာ အခုချိန်ထိတော့ ဝရမ်းထုတ်ခံခြင်း မရှိသေးပါဘူးနော်။ အနုပညာရှင်တစ်ချို့ထဲတွင် ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေ မခံချင်တာကြောင့် တော်လှန်ရေးတွင် ဟန်ပြလုပ်ခဲ့ကြသူများလည်း ရှိပါသေး တယ် ပရိသတ်ကြီးရေ….
ပရိသတျကွီးရေ အဆိုတျော စိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျ၊ နတေိုးနဲ့ နခွေညျဦးတို့ကတော့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ဒိတျဒိတျကွဲအနုပညာရှငျတှအေဖွဈ ရပျတညျနကွေသူတှပေါနျော။ သူတို့ရဲ့ Page တှဟောလညျး Followers သိနျးနဲ့ ခြီပွီး ရှိကွတာကိုလညျး အားလုံး အသိပါပဲနျော။
သူတို့တှဟော မွနျမာနိုငျငံရဲ့ လကျရှိတျောလှနျရေးမှာ အစပိုငျးက မပါဝငျခဲ့သျောလညျး ပရိသတျတှရေဲ့ Social Punishment လုပျမှုတှကွေောငျ့ ခဏတာ ပါဝငျလှုပျရှားခဲ့ပါသေးတယျ။ ဒီအနုပညာရှငျသုံးယောကျဟာ သူတို့ရဲ့Page မြားတှငျ နှဦေးတျောလှနျရေးအကွောငျး ရံဖနျရံခါမှသာ တငျလရှေိ့ကွတာပါနျော။အခုခြိနျမှာတော့ အနုပညာရှငျမြားနဲ့ ဂီတလောကမှ အဆိုတျော တျောတျောမြားမြားဟာ ၅၀၅(က) ဖွငျ့ တရားစှဲဆိုခံ ထားရပါပွီ။
အနုပညာရှငျမြားနဲ့ အတူ ပွညျသူတဈခြို့လညျး ၅၀၅(က) ဖွငျ့ တရားစှဲဆိုခံထားရကွောငျး သတငျးမြားတှငျ ကွငွောခဲ့သျောလညျး သူတို့သုံးယောကျလုံးမှာ အခုခြိနျထိတော့ ဝရမျးထုတျခံခွငျး မရှိသေးပါဘူးနျော။ အနုပညာရှငျတဈခြို့ထဲတှငျ ပရိသတျတှရေဲ့ ဝဖေနျမှုတှေ မခံခငျြတာကွောငျ့ တျောလှနျရေးတှငျ ဟနျပွလုပျခဲ့ကွသူမြားလညျး ရှိပါသေး တယျ ပရိသတျကွီးရေ….
ပုဒ်မ ၅၀၅ (က) ဖြင့် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံ လိုက်ရတဲ့ ရဲတိုက်ရဲ့မွေးနေ့ကို စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့ သန္တာဗိုလ်